Ukudilizwa Okuzenzakalelayo Izingxenye Ezenzakalelayo Moto Mangini - Genoa
Imoto kanye Nezimoto Izithuthi Demolition Mangini - Genoa
Ukuskrola nezingxenye zezimoto kanye nezithuthuthu.
4.4 /5 amavoti (amavoti angama-84)
Ukuzibhidliza uMangini ngo-Silvio Solimano 24 a Genoa yinkampani ekhethekile I-Autodemolizioni futhi ngaphakathi Isikhafu Nokuthengisa kwe Izingxenye zemoto e ngesithuthuthu.
Ukudilizwa kwemoto kanye nesithuthuthu iMangini eGenoa - Izingxenye zezindawo ezidayiswayo
Ukuzibhidliza uMangini indawo yokuthola uhla olubanzi lwe Izingxenye OkweImoto nesithuthuthu. Le nkampani ye Genoa, ngoba isebenza Isikhafu, wazi zonke izingxenye ze-Auto futhi we ngesithuthuthu futhi ingakusiza ukhethe okuhle kakhulu Izingxenye ukuthi udinga. Uma ezinye izingxenye zakho Auto noma eyakho ngesithuthuthu zizoguqulwa, zidlule Ukuzibhidliza uMangini ukubona ukuthi kukhona i Izingxenye ulungile. Ngokuqinisekile uzokuthola obekufuna noma okunye okusahleli kuwe. Abasebenzi basebenza kuwe ngobuchwepheshe nekhono.
I-Autodemolizione Imoto nesithuthuthu IMangini eGenoa - Ukusonga
Ukuzibhidliza uMangini in nge-Silvio Solimano a Genoa inkampani enakekela Isikhafu kanye nokuthengisa kwe Izingxenye OkweImoto nesithuthuthu. Uzinikele ekuqoqweni kwe Imoto nesithuthuthu abaye bahlupheka izingozi, gcina izingcezu ezisebenza kahle ezingasetshenziswa abanye abathengi njengoba Izingxenye bese uqala iI-Autodemolizione. Uma ungazi ukuthi uthathe kuphiImoto noma isithuthuthu for the Isikhafu, Ukuzibhubhisa kweMangini eGenoa indawo enhle ngoba sekuyiminyaka isebenza ku Isikhafu. Akukho lutho oluzosala lubekhona ngesikhathi sokulahlwa kweImoto noma isithuthuthu.
Imoto kanye nesithuthuthu ukuzicekela phansi iMangini eGenoa - Ubuchwepheshe nekhono
Ngeminyaka yakhe eminingi yesipiliyoni, Ukuzibhidliza uMangini isiqinisekiso sokwethenjwa emkhakheni we Isikhafu nasekuthengisweni kwe Izingxenye Ezenzakalelayo Nezithuthuthu. Kujabulisa iqembu labachwepheshe abasebenzela amakhasimende ukuphendula noma imiphi imibuzo ongaba nayo I-Autodemolizione noma ukunikeza usizo ekuthengeni Izingxenye Ezenzakalelayo Nezithuthuthu. Ukwethembeka, ukunemba, ukunaka imininingwane, ijubane kanye nokusebenza kahle kukhona amagama abukeziwe kulabo abasebenza kuwo Ukuzibhidliza uMangini a Genoa. Thembela kulabo abangawenza kahle umsebenzi wabo ngesikhathi esifushane kunazo zonke: thintana Ukuzibhidliza uMangini.
Ukudilizwa kwemoto neMoto neMangini eGenoa - Kuqondiswa imvelo
Ukuzibhidliza uMangini ngo-Silvio Solimano 24 a Genoa iyakhathalela imvelo ngoba ihlonipha imithethonqubo esebenza kuzo zonke izigaba zenqubo Ukusulwa Kwezimoto Nezithuthuthu. Kukhawulela ukungcola ngazo zonke izindlela ezingakhona, kusukela ngomzuzu wokuqala waletha izimoto Isikhafu. Ukuzibhidliza uMangini uhlala ekhipha isitifiketi esisho ukugunyazwa okudingekayo Isikhafu indawo lapho izolahlwa khona. Ukuvikela imvelo kubalulekile enhlalakahleni yawo wonke umuntu, ngakho-ke kungcono ukukhetha isikhungo Ukusulwa Kwezimoto Nezithuthuthu sina Ukuzibhubhisa kweMangini eGenoa.
Ikheli: UVia Silvio Solimano, 24
I-POSTAL CODE: 16165
Ucingo: 010 8357070
Umakhala ekhukhwini: 347 4676786
Inombolo ye-VAT: 03236960104